‘मान्छे मार्नु त मेरो सोख नै हो’
एजेन्सी न्यु योर्क, १२ पुस । एकजना हत्याराले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सोख मान्छे मार्नु भएको भनी लेखिएको नोट प्रहरीले आज बरामद गरेको जनाएको छ । अमेरिकाको न्यु योर्कस्थित सानो नगर वेब्स्टरमा एक व्यक्तिले सोमबार आगलागीको पासो थापी अग्निनिय
हराएका पन्ध्र बालबालिका भेटिए
एजेन्सी टोकियो, १२ पुस । जापनको राजधानी टोकियो नजिकैको समुद्रमा बुधबार हराइरहेका १५ जना बालबालिका भेटिएको बताइएको छ । ती बालबालिका चढेको डुङ्गा डुब्दा बुधबार हराएका बताइएको थियो । पछि उनीहरु सबैजना भेटिएको जापानी प्रहरीले जनाएको छ । जापानक
काजकिस्तानमा विमान दुर्घटना, २७ को मृत्यु
एजेन्सी आल्माटी(काजकिस्तान), १२ पुस । काजकिस्तानमा एक सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २७ व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार छ । उक्त विमानमा सात जना चालकदलका सदस्यसहित २७ जना व्यक्ति रहेका जनाइएको छ । सो विमानमा उच्चस्तरीय सैनिक अधिकारीहरु
रसियामा चिसोका कारण १ सय २३ को मृत्यु
एजेन्सी रसिया, १२ पुस । रसियामा चिसोका कारण दश दिनमा १ सय २३ जनाको मृत्यु भएको छ । मस्को क्षेत्रमा तापक्रम माइनस ३० डिग्री सेल्सियससम्म झरेको र पूर्वी साइवेरियामा माइनस ६० डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि अझै धेरैको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ ।
नेटो शिविरमा आक्रमण, चारको मृत्यु
एजेन्सी काबुल, १२ पुस । अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा पर्ने खोस्त प्रान्तमा नेटो सैनिक शिविरमा एक कारबम विस्फोट गराइएको समाचार छ । सो विस्फोटबाट चार व्यक्तिको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विस्फोटक पदार्थले भरिएको मिनिबस एक आत्मघाती आ
उत्तर भारतमा चिसाको कारण २५ को मृत्यु
एजेन्सी नयां दिल्ली, १२ पुस । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा चिसो र शित लहरका कारण २५ जनाको मृत्यु भएको छ । बिबिसी अनलाइनले चिसोका कारण २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो । चिसोका कारण भारतको उत्तर प्रदेशको राजस्थान, पन्जाव हरियानालगायतका क्षेत्र बढि
मालपोत घुस्याहाको अड्डा
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । मालपोत कार्यालय धनुषामा घुस माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जग्गा दर्ता (रजिष्टेूसन), अंशवण्डा, नामसारी गराउन पुगेका सेवाग्राहीसित कर्मचारीले घुस माग्ने गरेका छन् । ५० देखि १ हजारसम्म लिएर कर्मचारीले दर्त
धनुषामा दर्जनबढी कोठे र झोले विद्यालय
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । धनुषामा एकदर्जनको हाराहारीमा कोठे विद्यालय रहेको खुलासा भएको छ । नेपाल शिक्षक संघको आसन्न सातौं महाधिवेशनको पूर्ब सन्ध्यामा शिक्ष्कहरुको बिभिन्न खेमाको स्पर्धामा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप चलिरहदा एक दर
ट्रयाक्टरको ठक्करबाट एक गम्भिर
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । जनकपुरमा विहीबार ट्रयाक्टरको ठक्करबाट एक जना गम्भिर घाईते भएका छन् । जनकपुरको मिल्सएरियामा ज.१.त. ४९९७ नम्बरको ट्रयाक्टरले ठक्कर दिदां पैदल यात्री भुतही पटेर्वा वडा नं. ५ निवासी वर्ष ३५ का विजय कुमार ठा
महिला स्वयंसेविकाको योगदान सर्बाधिक : मन्त्री महतो
टुडे समाचरदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी योगदान महिला स्वयंसेवीकाको रहेको बताएका छन् । मन्त्री महतोले महिला स्वयंसेवीकाको भत्ता तथा सुविधा बढाउन प्रयासरत्त रहेपनि बज
संघ कार्यालयमा शिक्षकले तालाबन्दी गर्र्ने, मा“ग सम्बोधन नभए अधिवेशन हुन नदिईने
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । नेपाल शिक्ष्क संघ धनुषाको सातौं अधिवेशनको पूर्बसन्ध्यामा असन्तुष्ट शिक्ष्क नेताहरुले संघको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने भएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार बिहान संघका पदाधिकारिहरुसितको वार्तामा मा“गहरुको सम्बोधन
नमूना प्याज खेती
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । धनुषा झटियाही गाविसका महिलाहरु नमूना प्याज खेती गरेका छन् । अक्सफाम नेपालको सहयोगमा समाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र जनकपुरले संचालन गरेको विपद जोखिम न्युनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरुले प्याज खेती गर
अवैध पंक्षीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न उच्च सतर्कता
टुडे समाचारदाता जनकपुरधाम, १३ पुस । अवैध पंक्षीजन्य पदार्थ ओसारपसार नियन्त्रण गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुले उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । छिमेकी राष्टू भारतको सीमावर्ती बजारबाट सदरमुकाम जनकपुरसहित धनुषाका बजारमा अवैध पंक्षीजन्य पदार्थ ल्
अन्तर्जातीय विवाह गरेका धनुषाका एक जोडी सुरक्षाको माग गर्दै
रासस सिरहा, १३ पुस । प्रेम विवाह गरेर विस्थापित भएका धनुषाका एक जोडी जिउज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै सिरहाको लहान आइपुगेका छन् । धनुषाको प्रखे महुवा गाविस( १ का २० वर्षीय तुलसीराम पासवान र सोही ठाउँकी १८ वर्षीया पूजा शर्मा प्रेम विवाहपछि आफ